Mpanamboatra rafitra vy tsy misy vy | China Stainless Steel Mash System Factory ary mpamatsy
Toeram-pisotro misy sambo 5000L efatra: mash, tanky lauter, kettle, Whirlpool
Ny paosy / kettle fametahana dia vita amin'ny vy na varahina tsy manara-penitra. 2000L Mash tun dia sambo iray ampiasaina amin'ny fizotran'ny fametahana hanovana ireo fary ao anaty voamadinika voamadinika ho siramamy ho an'ny fermentation.
Toeram-pisotro misy sambo 4000L efatra: mash, tanky lauter, kettle, Whirlpool
Brewhouse vita amin'ny vy tsy miova 2000L
Anaran'ny vokatra: Brewhouse vita amin'ny vy tsy miova 2000L Matetika izahay dia mampiasa fitaovam-pidiovana SS304, SS316 mba hanaovana tanky fanaovana labiera. 1.Mash system Description 2000L Mash tun Ny tonona / kettle manoto dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Mash tun dia sambo iray ampiasaina amin'ny fizotran'ny fametahana hanovana ireo fary ao anaty voamadinika voatoto ho siramamy ho an'ny fermentation. Tifitra lauter 2000L Lauter tun dia ampiasaina amin'ny fanivanana sy fanazavana ny ranon-tsigara (antsoina hoe wort) avy amin'ny fangaro amin'ny rano malt nafanaina (antsoina hoe mash) izay ...
Matetika izahay dia mampiasa fitaovana SS304, SS316 fidiovana hanamboarana tanky famokarana labiera.